ပဟေဠိ Glow: ဦးနှောက်ပဟေဠိဂိမ်းစုစည်းမှု | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » ပဟေဠိ Glow: ဦးနှောက်ပဟေဠိဂိမ်းစုစည်းမှု
ပဟေဠိ Glow: ဦးနှောက်ပဟေဠိဂိမ်းငွေကောက်ခံ APK ကို
အကောင်းဆုံးပဟေဠိငွေကောက်ခံဂိမ်း Play, ပဟေဠိ Glow မာစတာရန်သင်ယူနှင့်ပျော်စရာရန်လွယ်ကူဖြစ်ကြောင်းပုံစံမျိုးစုံ, လိုင်းများ, အရောင်များ, နံပါတ်သို့မဟုတ်သင်္ကေတများပါဝင်တဲ့အကောင်းဆုံးပဟေဠိဂိမ်းစုဆောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျယုတ္တိဗေဒ, ပုံစံအသိအမှတ်ပြုမှုသို့မဟုတ် sequence ကိုဖြေရှင်းအပါအဝင်သင့်ရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်, ကြီးထွားနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့ကိုလည်းစွဲလမ်းပဟေဠိဂိမ်းတွေနဲ့စဉျးစားစရာပျော်စရာခံစားနိုင်။ အချို့သောပဟေဠိဖြေရှင်းနိုင်နှင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်စေခြင်းငှါ, ဂိမ်းတွေနဲ့သင့်ဦးနှောက်နှင့်အဆင့်တိုးမြှင့်။
•ထိပ်တန်း rated ဂိမ်း! အဆိုပါပဟေဠိ Glow တူသောလူအတော်များများ!
•စိန်ခေါ်မှု 900 အဆင့်!
•ဒါကြောင့် hexa ပိတ်ပင်တားဆီးမှုနှင့်အတူအခြားပျော်စရာဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
•စတုရန်းလုပ်ကွက်ဆွဲပါ & ဘုတ်အဖွဲ့မှာသူတို့ကိုထားပါ။
•စိန်ခေါ်မှု 450 အဆင့်!
•ပဟေဠိ Glow ကြော်ငြာများနဖူးစည်းစာတမ်း, insterstitial နှင့်ဗီဒီယိုကြော်ငြာတွေပါဝင်သည်ပါရှိသည်။
•ပဟေဠိ Glow အရိပ်အမြွက်, ကျောက်မျက်သို့မဟုတ် AD-အခမဲ့တူသော In-app ကိုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းချပါတယ်။
•ပဟေဠိ Glow ဂိမ်းပိုကောင်းအောင်နှငျ့အခြို့န်ဆောင်မှုများပေါင်းစည်းဖို့အချို့သောခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။
ရဲ့ Glow ရှုပ်ထွေးစေပါတယ်ကြပါစို့
ဘာဂ်ပြုပြင်မှုများ: တချို့ကပျက်ကျ & အသေးစားကိစ္စများ
ပဟေဠိ Glow: ဦးနှောက်ပဟေဠိဂိမ်းစုစည်းမှု
26.27 ကို MB